Caabbinta Anaerobic: waa maxay, sida ay u shaqeyso iyo muhiimada ay leedahay | Ragga Stylish
Sidaan ognahay, waxaa jira laba nooc oo iska caabin ah. Dhinac, waxaan ka leenahay caabbinta hawada dhinaca kalena iska caabinta anaerobic. Qodobkaan waxaan diirada ku saaraynaa qeexitaanka iska caabinta jirka iyo muhiimada jimicsiga. Waa midda soo baxda marka aan ku celcelino jimicsi xoog badan oo u baahan adeegsiga dadaal xoog leh oo jireed. Dhinaca kale, iska caabbinta aerobikada waxaa lagu gartaa iyada oo la siinayo awoodda lagu adkaysan karo wakhti ka badan ama ka yar dadaal leh xoog hooseeya.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato wax walba oo ku saabsan iska caabinta anaerobic, kani waa boostadaada.
1 Waa maxay iska caabinta jirka
2 Jimicsiyada Anaerobic
3 Noocyada iska caabinta anaerobic
4 Nafaqada ciyaaraha isboortiga
Waa maxay iska caabinta jirka
Inta lagu gudajiro geedi socodka halka xoogeedu ka sareeyo, jidhkeenu wuxuu ubaahan yahay qadar badan oo ogsijiin ah si loogu diro unugyada muruqyadeena lana buuxiyo baahiyahaan tamarta sare leh. Marka cayaartu ka gudubto xadka anaerobic waa marka dheef-shiid kiimikaad uu bilaabo inuu isticmaalo karbohaydrayt ahaan ilaha tamarta. Sababtaas awgeed, waxaa muhiim ah in markaan jimicsiga ku jirno aan cunno cunno ay ku badan tahay karbohaydraytyadu si aan u helno waxqabad wanaagsan. Murqaha glycogen waxaa loo isticmaalaa inuu yahay isha ugu weyn ee laga helo tababarka culeyska. Tani waxay keenaysaa in waxqabadkeenu yaraado haddii cuntadeena ay ku yar tahay karbohaydraytyada
Awoodda cayaartooygu u leeyahay inuu awood u yeesho inuu iska caabiyo la'aanta oksijiinta jirka ku jirta waa waxa loo yaqaan iska caabinta anaerobic. Muddada dheer ee aad u adkeysan karto ogsijiin la'aanta, ayaa iska caabinta aerobic ee aad u badan tahay Hadday jirto ogsijiin la'aan, layligu waa inuu ahaadaa mid xoog badan. Haddii orodyahanku leeyahay adkeysi aan fiicnayn, waxaa suurtagal ah in kaliya tartanka, laakiin caafimaadka cayaaraha, la geliyo khatar. Jimicsiyada qaarkood sida waa looxyada isometric ee ulaha caloosha waa ku weyn yihiin hagaajinta adkeysiga anaerobic.
Awoodda waxqabadka ee qofka waxay la xiriirtaa awoodda waraabka muruqyada. Dadaallada ay keeneen jimicsiyada jir-dhiska waxaa loo kala saari karaa inay yihiin kuwo firfircoon oo taagan. Tusaale ahaan, adkeysiga anaerobic ee soo hagaagaya wuxuu dhacaa marka ciyaartooygu wuxuu ku dhaqmaa 100 ama 200 mitir oo fidsan waqtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah.
Layli jimicsi ayaa ka kooban dhowr hawlood oo waqti gaaban ku saleysan xoog iyo xawaare. Waxaa lagu gartaa inay yeeshaan xoog badan iyo muddo gaaban. Tusaale ahaan, mid ka mid ah laylisyada iska caabinta anaerobic ee aadka loogu isticmaalo bulshada dhexdeeda waa qaadista culeyska. Jimicsiyadaan, dhaqdhaqaaqyada waxaa lagu xoojin karaa iyadoo laga gudbo iska caabinta iyo kordhinta xoogga murqaha. Tan waxaad ku kordhin kartaa murqaha oo aad ku xoojin kartaa foosha, kaas oo gacan ka geysta macdanta lafaha.
Jimicsiyadan ayaa caan ku ah jir-dhiseyaasha kuwaas oo aan doonaynin inay gubaan dufanka haddii aysan u isticmaalin sida ugu macquulsan ee awooddooda jidheed muddo gaaban. Muruqyada waxay soo saaraan aashitada loo yaqaan 'lactic acid' waxayna ku dambeeyaan inay helaan mug weyn.
Waxaa jira noocyo badan oo jimicsi jimicsi ah. Waxaan si kooban u qeexi doonnaa iyaga:
Culeyska: Waa jimicsi dhammaystiran oo lagu kicin karo isku-duwidda, isku-dheellitirka waxayna kuu oggolaaneysaa inaad isku hagaajiso qaar ka mid ah qaybaha jirka si loo hagaajiyo isku midka. Jimicsiga noocan ahi wuxuu u baahan yahay barasho hore ee farsamada ku jirta layliyada si uu u awoodo inuu qabto iyaga oo aan khatar u lahayn caafimaadka. Dad badan ayaa ku dhaawacmay farsamo xumo xaga jimicsiga qaadista culeyska ama adeegsiga culeys ka weyn wixii ay awoodaan.
ABS: Inta badan jimicsiyada caloosha waxaa lagu sameeyaa miisaanka jirka waxayna kicin karaan murqaha badan ee caloosha iyo guud ahaan aagga. Layligaaan jimicsi ahaan xoog, iskuduwid iyo isku dheelitir ayaa sidoo kale laga shaqeeyaa, iyadoo marwalba la ixtiraamo xaddidaadaha shaqsi kasta.
Jimicsiyada mashiinka xoogga: Jimicsiga noocan ah wuxuu u oggolaanayaa jirka inuu ka shaqeeyo gudaha iyo gaar ahaan muruq kasta. Waxaa loo yaqaanaa jimicsi falanqeyn ama qalab jimicsi iyo qolka jimicsiga waxaa loola dhaqmaa sidii caawimaad lagu hagaajinayo laguna shaqeynayo qaab diiradda kooxda muruqyada. Tusaale ahaan, kordhinta taranka 'pulley triceps' waxay jimicsi u noqon kartaa kooxdan muruqyada ah.
Guud ahaan, nooc kasta oo jimicsi ah oo ka kooban sameynta dadaal waqti gaaban iyo xoog leh waa jimicsi jimicsi. Adiga oo aan sii socon, orodyahanno, xadhig boodboodaya, samee muddooyin, iwm Waxay tusaale u yihiin laylisyada anaerobic. Waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso shaqo yar oo fidinta muruqyada ka dib jimicsiga jimicsiga si looga fogaado dhaawac. Sidan ayaanu ku horumarin doonnaa dhaqdhaqaaqa wadajirka ah.
Noocyada iska caabinta anaerobic
Waxaa jira noocyo kala duwan oo iska caabin ah anaerobic iyadoo kuxiran isha tamarta. Labada nooc ee ugu waawayn waa alactic iyo lactic. Midka koowaad waxaa lagu gartaa iyadoo la adeegsanayo alaabada tamarta si looga takhaluso haraaga acid lactic. Tusaale ahaan tan waa tijaabooyinka xawaaraha oo soo saara qiyaastii 180 garaac daqiiqaddii.
Dhinaca kale, iska caabbinta laastikada lactic waa midka ay soo saarto aashitada lactic sababta oo ah waxay leedahay xoojin sare iyo yaraanshaha oksijiinta. Caabbintaani waxay khuseysaa jinsiyadaha in ka badan 100 mitir iyo isku dheelitirka tartamada caqabadaha.
Nafaqada ciyaaraha isboortiga
Sidii la filayay, si loo wanaajiyo waxqabadka isboortiga adkeysiga anaerobic nafaqada ayaa loo baahan yahay iyadoo loo eegayo ujeeddada. Sidaa darteed, xirfadleyda cayaarahaani waxay u baahan yihiin cunto hodan ku ah cuntooyinka bixiya xoog badan oo tamar ah. Xaalado badan, nafaqo dheeraad ah ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo daboolo baahiyaha. Kaabisyada isboortiga ee sida weyn loo isticmaalo, labadaba waxtarkooda iyo aqoontooda ku saabsan, waa creatine, budada borotiinka iyo kafeyn.
Cuntadani waxay dooneysaa inay ka hortagto luminta glycogen ee jirka iyo inay kordhiso awoodda keydinta ama nafaqooyinka. Cunnooyinka ugu caansan ee loo yaqaan 'bodybuilders' waa cunnooyin ay ku badan yihiin karbohaydraytyadu, kuwa dhexdhexaadka ah iyo kuwa ay ku badan tahay borotiinka oo ay ku yar tahay dufanka.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto iska caabinta anaerobic.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Diidmada Anaerobic
Noocyada daawashada ugu fiican